FOD - K-Htet - Wattpad
#translation #system #romance #shounenai #hacker
351K 32.7K 117
FOD _ Arc_8 Super Model
239K 43.8K 47
Title: Quickly Wear the Face of the Devil Author: Fengliu Shudai အကျဉ်းချုပ် - ထိပ်တန်းဟက်ကာတစ်ယောက်ကိုဘဝများစွာပြန်လည်မွေးဖွားဖို့ Lod God System ကရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာကြီးအဆုံးသတ်သွားတော့ အရာအားလုံးက ပျက်စီးသွားပြီး ဝမ်းနည်းစရာတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံး ကျိုးယွင်ရှန့် သည်ဗီလိန်စနစ်၏ထိန်းချုပ်မှုမှလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီး လက...
FOD Extra 1 _Xue Zi Xuan (MM Translation)
180K 32.4K 58
快穿之打脸狂魔 Authors - Fengliu Shudai, 風流書呆 "Xue Zi Xuan" preview: Don't know if all of you still remember or not, in Quickly Wear the Face of the Devil's ending, Zhou Zhou repaired and saved the database that was destroyed by the Lord God. This story happens in the virtual world re-built by Zhou Zhou. Xue Zi Xuan vs villa...
The Next Top Supermodel (FOD Arc 8)
Myanmar Translation of Quickly Wear The Face of Devil (Arc 8) Update-5full Chapters per week Both Zawgyi & Unicode are available
FOD Arc_10 _အလင်းနတ်ဘုရား၏ ဖူးစာရှင်
342K 53.8K 50
Quickly wear face of devil ARC_10 (Myanmar translation)
540K 61K 52
FOD_Honeymoon on Beast-man Planet (သားရဲဂြိုလ်မှ ပျားရည်ဆမ်းခရီး)
271K 38.1K 40
Extra4story arc 快穿之打臉狂魔 by 風流書呆 Title: Quickly Wear the Face of the Devil Author: Fengliu Shudai
155K 19.4K 16
The Real World of Quickly Wear Face of the Devil ( zawgyi + unicode)ကျိုးကျိုးလေးနဲ့ သူ့ချစ်ချစ်တို့ ကမ္ဘာအစစ်ကို ပြန်ရောက်သွားပြီနော်။ ဒီ Real World က Arc 15 ပြီးရင်တန်းလာတာပါ။ ကြိုးကြိုးလေးနဲ့ သူ့ခဈြခဈြတို့ ကမ်ဘာအစဈကို ပွနျရောကျသှားပွီနျော။ဒီ Real World က Arc 15 ပွီးရငျတနျးလာတာပါ။
17.6K 867 4
374K 40.2K 46
970K 98.2K 53
24.9K 467 16
this is meant only for offline reading. Credit to www.novelupdates.com
56.8K 3.7K 8
Original Title - Quickly wear the face of the devil (快穿之打脸狂魔) Author - ©® Fengliu Shudai Original translation - ©® keztranslations Genre - Adventure, Fantasy, Dimension traveller, Romance,BL Status - 193 chapters + extras 15 arcs + epilogue arc ကျိူးယွင်​ရှန့်​ဆိုတာသိပ္ပံ​ခေတ်​ကhackerတစ်​​ယောက်​။သူက ဘဝရာ​ထောင်​ချီဗီလိန...
Quickly Wear The Face of Devil (Arc 10)
14.5K 109 14
快穿之打臉狂魔 by 風流書呆 RAW Title: Quickly Wear the Face of the Devil Author: Fengliu Shudai This is not my translation fiction. I only collect for my offline read. So don't vote and support me, please vote and support original authors and translators. Thanks. Summary: The top hacker was chosen by the Lord God to be reborn a...
327K 41.5K 67
433K 44.1K 59
59.2K 4.9K 12
FODရဲ့ဇာတျသိမျးကိုမှတျမိကွမလားမသိဘူး။ကြိုးကြိုး(ကြိုးယှငျရှနျ့)က Lord God ဖကျြစီးခဲ့တဲ့အခကျြအလကျတှကေို ပွနျယူပွီး ပွငျခဲ့တယျ။ ဒီဇာတျလမျးက ကြိုးကြိုး ပွနျပွီးတညျဆောကျခဲ့တဲ့ ပုံရိပျယောငျကမ်ဘာထဲမှာ ဖွဈခဲ့တာ။ ပွနျလညျမှေးဖှားပွီးနောကျ ဗီလိနျတဈယောကျရဲ့တိုကျခိုကျမှုတှနေဲ့အတူ ဗီလိနျကြိုးကြိုးကို ရှယျဇီရှမျနဲ့အပွိုငျ ဇာတျ...
3.4M 111K 191
117K 1.7K 16
25.4K 1.1K 3
ကလဲ့စား FOD- Arc 13 [မြန်​မာဘာသာပြန်​] (Completed) Zawgyi
274K 23.9K 22
Original Title - Quickly wear the face of the devil (快穿之打脸狂魔) Author - ©® Fengliu Shudai Original translation - ©® keztranslations ကျိူးယွင်​ရှန့်​ဆိုတာသိပ္ပံ​ခေတ်​ကhackerတစ်​​ယောက်​။သူက ဘဝရာ​ထောင်​ချီဗီလိန်​အဖြစ်​ပြန်​လည်​​မွေးဖွားဖို့ Lord Godရဲ့​ရွေးချယ်​ချင်းကိုခံခဲ့ရတယ်​။ မတူညီတဲ့ဘဝရာ​ထောင်​ချီ။ အဓိပ္ပာယ်​မရှိတဲ့...
ထာဝရချစ်သူ/ထာဝရခဈြသူ(FOD Arc 4)
98.1K 9.2K 13
အမှောင်ထဲက [Face of the Devil]
455K 54.4K 38
Original Title - Quickly wear the face of the devil (快穿之打脸狂魔) Author - ©® Fengliu Shudai Original translation - ©® keztranslations ကျိူးယွင်​ရှန့်​ဆိုတာသိပ္ပံ​ခေတ်​က hacker တစ်​​ယောက်​။သူက ဘဝရာ​ထောင်​ချီဗီလိန်​အဖြစ်​ပြန်​လည်​​မွေးဖွားဖို့ Lord God ရဲ့​ရွေးချယ်​ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်​။ မတူညီတဲ့ဘဝရာ​ထောင်​ချီ၊ အဓိပ္ပာယ်​မရှိတ...
စူပါမော်ဒယ်လ် (Arc-8 FOD) [ခေတ္တရပ်နား]
150K 14.6K 15
Original Title - Quickly wear the face of the devil (快穿之打脸狂魔) Author - ©® Fengliu Shudai Original translation - ©® keztranslations Burmese title - '' စူပါမော်ဒယ်လ် '' Arc Title - Arc -8 , The Next Top SuperModel
အချစ်​​တေးသွား (FOD Arc 6)
127K 15.7K 24
Title ...Quickly wear the face of devil Author.©®Fengliu Shudai Original translator..©®keztranslations ကျိုးယွင်​ရှန့်​က သိပ္ပံ​ခေတ်​က hacker တစ်​​ယောက်​ဖြစ်​ပြီး ဘဝရာ​ထောင်​ချီ ဗီလိန်​အဖြစ်​ ပြန်​လည်​​မွေးဖွားဖို့ Lord God ရဲ့ ​ရွေးချယ်​ခြင်း ခံခဲ့ရတယ်​မတူညီတဲ့ ဘဝ​တွေ မတူညီတဲ့ mission ​တွေကို လုပ်​ရင်း အဓိက ဇာတ်​လိ...
ဗီလိန်မာယာ ( Arc2)
73.9K 4.5K 12